Asus ROG Phone 3, miavaka sy sary maromaro no miseho | Androidsis
Asus ROG Phone 3, miavaka ny sary sy sary isan-karazany
Asus mahalala ny lazan'ireo finday filalaovana lehibe, ka izany no antony itiavan'ny orinasa hifantoka amin'ny finday avo lenta manaraka ny lalao. Ny orinasa efa miasa amin'ny fanombohana ny Asus ROG Phone manaraka, fanavaozana lehibe iray raha mampitahanao ireo fiasa teo aloha amin'ireo tafaporitsaka androany.
Ny mpantsaka iray amin'ny alàlan'ny Weibo dia naneho ny tsipiriany rehetra sy ny sary marobe amin'ilay fitaovana voalaza, ka hanakaiky ny fanambarana azy io. Asus ROG Finday 3 kasaina haseho indraindray amin'ny trimester fahatelo amin'ity taona ity ary mikasa ny hiaraka amin'ny mpikambana iray amin'ny fianakavian'i Zenfone.
1 Ireo fiasa voasivana
2 Ho tonga afaka volana vitsivitsy
Ireo fiasa voasivana
Araka ny tsaho, ny Asus ROG Finday 3 hampiditra tontonana 6,59-inch Full HD + OLED miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 144 Hz, zava-dehibe raha ny lalao video no resahina. Izy io koa dia miloka amin'ny fiarovana Gorilla Glass ho toy ny fanamafisana rehefa hianjera ary na dia maratra aza.
El Ny fitaovana vaovaon'i Asus dia hampiditra ny processeur Snapcagon 865 an'ny Qualcomm miaraka amin'ny ivon'ny Kryo 585 amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, dia hahatratra 3,09 GHz izany fa tsy ny kinova mahazatra 2,84 GHz. Misy ny resaka fa hanana 16 GB RAM sy bateria 6.000 mAh miaraka amina vidiny 30W haingana.
Ny volavola eo anoloana dia misy bezème symmetrika amin'ny farany ambany sy ambony, fa ny ao aoriana kosa mitovy amin'ny ROG Finday II. Misongadina ny maodelin'ny fakan-tsary, amin'ity tranga ity dia afaka mahita hatramin'ny sensor telo ianao fa tsy roa, na ny sivana aza dia milaza fa 9.85 mm ny hateviny ary milanja 240 grama.
Ho tonga afaka volana vitsivitsy
El Asus ROG Finday 3 Ho tonga alohan'ny volana Oktobra, ny vidin'ity finday nantsoin'izy ireo hoe bibidia vaovao ity dia manodidina ny 800-900 euro ary nantsoina hifaninana amin'ny Nubia Red Magic 5G sy modely hafa efa misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Asus ROG Phone 3, miavaka ny sary sy sary isan-karazany
Ho tonga any Espana ny Xiaomi Mi Band 5 miaraka amin'ny fiambenana Mi Watch